UMartin Vrijland: UMartin Vrijland
Maka: UMartin Vrijland
Ukubuyekezwa okubalulekile kwezobuchwepheshe le webhusayithi lapho usizo lwakho ludingeka khona * PHAMBILI 24 Okthoba *
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-24 Okthoba 2018	• 1 Comment
* Umlayezo wokuqala 19 Okthoba * Ngenxa yokuthi le website isebenze iminyaka embalwa futhi inani lezivakashi ngezikhathi eziphakeme kakhulu, kubalulekile ukuthi iwebhusayithi isebenze ukucushwa kwesiphakeli esindayo. Abafundi abaningi baye bakhononda ngokuhamba kancane okuyinto i-website ngezinye izikhathi ihamba. Isizathu salokhu sesilandelwe futhi sibonakala sitholakale [...]
ANP kaJohn de Mol, Umshini Wokuvumela, Imvume Yamalungelo Elayisensi 2: I-Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders BV
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-18 Septemba 2018	• 7 Amazwana
Uma uthola indlela kaJohn de Mol yokusebenza ku-ANP lapha kusayithi, ungase ulandele ukuthi le nkampani inikeza kanjani izimangalo zamalungelo okulayisenisi weMvume yokuPhathwa kweMvume yokuPhathwa kweMvume yokuShushiswa kwezithombe ezihlokweni. Ufunde futhi ukuphendula kwami ​​kulokhu (bheka lapha). Manje sisesigaba esilandelayo, yilokho [...]
Yenza isikhalazo, kodwa ungenzi lutho: ekupheleni komdlalo wokuzijabulisa wamahhala kaMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-9 Agasti 2018	• 28 Amazwana
Ngokusobala siyisizwe esicabanga ukuthi kukhona okungalungile kakhulu emhlabeni, kodwa uma sifika kuwo, sikhetha ukungenzi lutho thina ngokwethu. Isenzo esisodwa esisithathayo sixoxisana kakhulu ngesikhathi sokuphuza isiphuzo noma izakhamuzi futhi mhlawumbe sisahlelwa kanjalo emphakathini ukuthi [...]
BREAKING UMartin Vrijland usinda ngokusindiswa empilweni yakhe, kodwa akukho mithombo yokubika
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-27 Juni 2018	• 6 Amazwana
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule leli zwe lihlaselwe ukuhlaselwa "emshinini wamahhala nokuzimela" (njengoba uMark Rutte abize), ngokufaka imfucuza, okuyinto umbuzo ukuthi ngabe awukwenziwanga yini. Kufanele uthathe igama elithi 'self-created' ngokubanzi, ngoba, ngokwesibonelo, ungakwazi ukuzihlomisa ngeqembu lamaphekula njenge-IS, izimali nokwandisa [...]
UMartin Vrijland udinga ukuhlaselwa esakhiweni seTelgraaf
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-26 Juni 2018	• 15 Amazwana
UMartin Vrijland udinga ukuhlaselwa esakhiweni seTelgraaf! Ukuhlaselwa yiqiniso kuyi-umpteenth news production production futhi ngakho-ke ungasho ukuhlaselwa okunjalo nokuthula kwengqondo. Uma kukhona ukuhlambalaza, akukho ukuhlaselwa nhlobo futhi ukufaka ukuhlaselwa okunjalo kungukuthi ukuphendukela kwengqondo. Ingabe nawe [...]
UMartin Vrijland uyeka UKUBALULEKILE OKUBALULEKILE
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-3 April 2018	• 15 Amazwana
Ngemva kokuthola ama-e-mail amaningi futhi ngemva kwezinkulumo ezithile ezinhle, nganquma ukucubungula isinqumo sami sokuyeka ngokuqinile. Ikakhulukazi ukusabela kukaNawho Hoogeweij (ngaphambili uJeroen Hoogeweij), umshayeli wesifundazwe owayengumdlali weqembu uSwapichou futhi manje usebenza kuJalta.nl, kwakuyi-drop. UJeren [...]
UMartin Vrijland uyayeka
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-2 April 2018	• 15 Amazwana
Njengabaningi abaye baqaphela, angibhale phansi ngesonto eledlule. Kwakuyisikhathi sokuzindla. Ukuvala ikhasi le-Facebook ngokucacile kwaba nomthelela omkhulu ezinombolo zami zezihambeli, naphezu kokucutshungulwa kwe-Facebook kuthonya izinyanga eziningana. Isicelo sami kubantu ukubhalisela iphephandaba kanye [...]
UMartin Vrijland Ikhasi le-Facebook lisusiwe ngokucwaninga nokuhlola
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-22 March 2018	• 2 Amazwana
Ikhasi le-Facebook likaMartin Vrijland lisanda kuthunyelwa ngaphandle kwami. Lesi simemezelo sabonakala senza isidlova esidingekayo futhi kwacatshangwa ukuthi kwakuyihlaya. Ngabuye ngacwayiswa ukuthi lesi senzo singangiholela kubafundi abaningi kakhulu futhi ngiyazi kahle lokho, kodwa [...]
Ukuzikhanyela kokubulawa kwesibindi ngokushesha kwenza abantu baseNtshonalanga abaningi basabele. "Cha, cha, cha! Sibonile izithombe eziningi kakhulu ezimbi! "Ingabe ingqondo yokuqala. Lokho esingaqapheli ukuthi lezi zithombe zidutshulwa emakamu lapho imigwaqo yokunikezela ibanjwe khona yiziNyunyana, okwenza iziboshwa zilahlwe yithambo. [...]
kusukela ngoFebhuwari 2020
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.187
Hlaziya op I-Netflix 'Pandemic: ungavimba kanjani umkhankaso wokukhangisa' wokugomela indawo yonke iSuperHuman-2.0?
SalmonInClick op I-Netflix 'Pandemic: ungavimba kanjani umkhankaso wokukhangisa' wokugomela indawo yonke iSuperHuman-2.0?
SandinG op Igciwane leCorona, ukusikwa okufushane kokuqedwa kwemali kanye nemiphumela yezomnotho emhlabeni jikelele
SalmonInClick op Igciwane leCorona, ukusikwa okufushane kokuqedwa kwemali kanye nemiphumela yezomnotho emhlabeni jikelele
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM op Igciwane leCorona, ukusikwa okufushane kokuqedwa kwemali kanye nemiphumela yezomnotho emhlabeni jikelele